Iseti Yokuhlambela Ukucingisisa kwigumbi lokuhlambela leentyatyambo zeLotus ... Igumbi lokuhlambela leLotus sele limiliselwe ngokuthatha ubume bamagqabi eLotus avela kwisibhakabhaka uZhou Dunyi ofundisa intanda-bulumko kaConfucius wathi "Ndiyayithanda intyatyambo yeLotus kuba ikhula eludakeni kwaye ayifani nemdaka," intetho yakhe. Amagqabi e-Lotus, aphinda amdaka njengoko kuchaziwe apha. Ulwakhiwo lwegqabi lentyatyambo leLotus lilingisiwe kwimveliso yolu chungechunge
Isibane Esingaphakathi Ukuxhasa uyilo olucacileyo lwangaphakathi lekhemisi, ii-luminaires ezisebenzayo azibonakali kwimbonakalo yazo, zitsalela ingqalelo yazo ukukhanya kwazo endaweni yoyilo lwazo. Izibane ezikhanyayo ezisisiseko zingadityaniswa kwizikhanyiso eziqinileyo ezilandelela ubume befanitshala okanye zibekwe emacaleni esilinganisi esinqunyanyisiweyo, ukuyigcina ikhululekile kwizibane zangaphantsi njengoko kunokwenzeka. Ke, abasebenzisi banokujolisa kumkhondo wokukhanya okhokelela kwikhemesti, equlathe i-RGB-LED-backlit tiles ehambelana nombala ngokufanayo
Ludonga Oluxhonywe Kwi-Wc Pan
Ludonga Oluxhonywe Kwi-Wc Pan Ngelixa isitya sendlu yangasese ecocekileyo singena kulawulo lweenguqu ezithambileyo, sishiya nomoya olula kunye nobuncinci bemekobume. Ayichaphazeli kuphela umsebenzisi wayo kunye ne-esthetics yayo kodwa idibana nokucoceka kunye nobumsulwa kwaye ihlonele indalo. Indlela ethe gabalala kwisitulo sokuseta uyilo lokuphazamiseka okulula, ukuxhoma iseti yezitulo zangasese zezitshixo zomsebenzi kunye namaqhosha olawulo aza kufakwa kwinxalenye engaphakathi yecandelo lekhava. Amaqhosha aqhagamshelwa ngumsebenzisi abekwe kwiindawo ekunzima ukuzifumana zingcolile, ke oku kunika inzuzo eyongezelelweyo ngokubhekisele kucoceko.
inci I-Ceramic Wednesday 22 September
Prisma Isicoci Sefandesi Esibonakalayo Se-Ultrasonic Tuesday 21 September
Baan Isidlo Sangokuhlwa Sekhabhathi Monday 20 September
Ibhentshi Yesitrato Isikhenkcisi Sokuhlambela Iseti Yokuhlambela Isibane Esingaphakathi Ludonga Oluxhonywe Kwi-Wc Pan